EPL: Man United oo gool soo daahay guul kaga gaartay Hull City… + SAWIRRO – Gool FM
EPL: Man United oo gool soo daahay guul kaga gaartay Hull City… + SAWIRRO
Haaruun August 27, 2016
(Manchester) 27 Agoosto 2016 – Kooxda kubadda Manchester United ayaa gool soo daahay guul kaga gaartay naadiga Hull City oo ay marti u ahayd, waxaana Mourinho iyo kooxdiisa ay sidaas ku gaareen guushoodii saddexaad oo xiriir ah horyaalka Premier League.
Manchester United ayaa fursado ay ciyaarta hoggaanka ugu qaban kartay heshay qeybta hore, waxaana labo fursadood ka lumiyey Wayne Rooney iyo Zlatan Ibrahimovic.
Dhanka Hull City waxaana dhaawac ka soo gaaray xiddigooda Robert Snodgrass, markii uu ku dhacay birta goolka Man United, kulankan ayaana lagu kala nastay barbaro goolal la’aan 0-0.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay 48’daqiiqo waxaa garoonka dhaawac soo gaaray qeybtii hore garoonka uga baxay laacibkii Hull City ee Robert Snodgrass waxaana lagu bedelay Shaun Maloney.
Kooxda Hull City oo difaaceedu aad u wanaagsanaa ayay ku adkaatay Man United inay waqti hore shabaqa gaaraan macallin Mourinho ayaana sameeyey labo bedel oo deg deg ah isagoo garoonka soo galiyey Marcus Rashford iyo Henrik Mkhitaryan, waxaana lagu kala bedelay Anthony Martial iyo Juan Mata.
Ciyaarta oo 90’daqiiqo dhammaatay daqiiqadihii dheeriga ahaa oo lagu kordhiyey ahaana saddex daqiiqo ayey goolka guusha oo soo daahay la timid Man United, waxaana u dhaliyey Marcus Rashford oo bedel ku soo galay, kaddib markii oo baas wanaagsan ka helay Rooney oo garab ka soo xarooday, kulanka ayaana ku soo idlaaday 1-0 ay ku adkaatay Man United.
SERIE A: Juventus oo dirqi uga adkaatay Lazio…+SAWIRRO
Xiddig yaraha Manchester ee Rashford oo laga xaday saacad Rolex ah oo qiimaheedu yahay 20,000 Gini